Fanofana fiara any Bali " Journey-Assist - Ireo lesoka. Inona no tadiavina?
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Ny fanofana fiara any Bali
Ny fanofana fiara any Bali
Ny fanofana bisikileta ao Bali
Fitaterana Bali Bali
Ahitana ny fitsipiky ny fifamoivoizana ao Bali
Malaza eran-tany ny moron-dranomasina sy ny trano fandraisam-bahiny Bali, na eo aza ny fitsangatsanganana an-tanety, dia tsy azo atao ny mankasitraka ny hatsaran'ny Bali. Fiara iray manofa trano no hanomezana anao fahafahanao mankasitraka ny farihy any an-tendrombohitra, rakotra ahitra, gorges mahavariana, tanàna tany am-boalohany, ary hahita Tempolin'i Bali vitsivitsy (izay misy 20 000 eo ho eo fotsiny). Sarotra eto raha tsy misy ny fitaterana olona, ​​satria ratsy ny fitateram-bahoaka, ary lafo be ny taxi mandritra ny halavirana.
Manofa fiara amin'ny orinasa iraisam-pirenena
Ny fanofana fiara eny amina orinasa iray eo an-toerana
Fangatahana amin'ny fanofaanana fiara ao Bali
Inona ireo fiara manoro hevitra hanofa
Tokony hojerena rehefa manofa
Làlana mankany Bali
Polisy misahana ny fifamoivoizana any Bali. lamandy
Manofa fiara any Bali any amina orinasa iraisam-pirenena
Goavambe eran-tany toy ny Sixt, Avis sy Hertz tsy manana biraony ao Bali, fa mbola afaka mamaky fiara ao amin'ny tranonkalany hampiasaina amin'ity nosy ity ianao. Haterina any amin'ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai na any Denpasar (ny fiara dia hoentina rehefa tapitra ny fampanofaana). Ny fiara rehetra an'ireto orinasa ireto dia vaovao, manana kilaometatra ambany sy tsy misy fepetra. Ny manofa Toyota Avanza mandritra ny 1 herinandro dia mitentina 5,8 tapitrisa rupee (kely 400 11,5 dolara). Ity vidiny ity dia misy fiantohana miaraka amin'ny sakanana, izay mametra ny andraikitry ny mpanjifa raha misy fahasimbana amin'ny fiara na ny fangalarana azy amin'ny vola 820 tapitrisa rupee ($ XNUMX). Mba hamaranana ny fifanarahana hofan-trano miaraka amina orinasa iraisam-pirenena, mila pasipaoro ianao, karatry ny banky mpamily manana ny zo, mitondra ny zom-pirenena sy iraisam-pirenena.
Azo atao ny mampiasa zon'ny fizahan-tany tsy maharitra fa tsy manana zo iraisam-pirenena. Ity farany dia afaka mivoaka ao amin'ny paositry ny polisy ao Denpasar ao anatin'ny 30 minitra. Mba hanaovana izany, mila pasipaoro ianao, fahazoan-dàlana mitondra fiara (navoakan'ny fanjakanao, izany hoe, Rosiana nasionaly, Okrainiana, sns), sary. Mitentina 300 rupees (kely mihoatra ny $ 20).
Momba ny carte de crédit, rehefa vita ny fifanarahana, ny orinasa mpanofa dia manakana ny sanda fiantohana amin'ny habetsahan'ny zavatra nesorina. Miverina aorian'ilay fahazoan-dàlana izy. Ilaina ny mandoa manokana ho an'ny fitaovana tsy ampidirina amin'ny vidin'entana lehibe. Ohatra, ny seza amin'ny fiaran'ny fiara amin'ny ankizy dia mitentina 60 rupee ($ 5) isan'andro. Navoaka miaraka amina tankina 100% ilay milina. Mila miverina ianao feno azy koa feno. Raha tsy izany, ny vidin'ny solika tsy misy dia esorina amin'ny sandry azo alaina.
Manofa fiara any Bali any amina orinasa iray any an-toerana
Any Bali, ny orinasa mpanofa fiara eto an-toerana dia miasa toy ny Wirasana, Trac Astra, Vorona Volontany, Ayro Bali, Echo Bali, Kuta Rent Car ary ny hafa. Ny tombotsoany dia ambany ny vidiny ary ny fisian'ny birao marobe. Ireo orinasa ireo dia manana birao any Denpasar, ary amin'ny seranam-piaramanidina, ary isaky ny toerana Bali malaza indrindra. Ny ankamaroan'ireto orinasa ireto dia manana ny tranokalan'izy ireo manokana izay ahafahana mametraka fiara mialoha, ary na dia amin'ny tsy fandraisana andraikitra aza.
Ny vidin'ny fanofaina dia araky ny sarin'ny fiara, ny taonany, ny mileage, ny famelabelarana. Ohatra, ny Toyota Avanza malaza be 2-3 taona isan-kerinandro dia afaka manofa trano 3 tapitrisa (210-220 dolara). Ny fanofana fiara ao mandritra ny 2 herinandro dia mitentina 5 tapitrisa rupiah (350-360 dolara). Ahitana fiantohana amin'ny lozam-pifamoivoizana sy ny halatra amin'ny francaise 4,5 tapitrisa rupee. Ny fandoavam-bola amin'ny karama na carte dia azo atao. Raha ny mahazatra, ny fiara amin'ireo orinasan'ny fanofana any an-toerana dia mihantitra ary manana kilaometatra avo kokoa noho ny fiara an'ny orinasa iraisam-pirenena.
Ny vidin'ny fanaterana fiara amin'ny toerana rehetra eto amin'ny nosy sy ny famerenana ny fiara dia tafiditra ao amin'ny vidin'ny fanofana avy amin'ireo orinasa eo an-toerana. Saingy ny Bali dia tsy ara-potoana, ka ny tara mandritra ny adiny roa dia ny mahazatra.
Alohan'ny hanaovana sary manofa, ilaina ny mijery tsara ny fiara, jereo ny toetoetran'ny rivotra, ny toetry ny vatana, ny varavarankely sy ny kodiarana, manamboatra ireo lesoka tsirairay ao amin'ny antontan-taratasy mifandraika ary esory miaraka amin'ny fakan-tsary.
Ny vidiny mora indrindra dia atolotry ny orinasa madinika izay tsy manana fiantohana ho an'ny fiaran'izy ireo mihitsy. Ny sasany amin'izy ireo dia manome fiara tsy misy tahiry mihitsy. Na izany aza, amin'ity tranga ity, ny vidin'ny fahavoazana raha misy lozam-pifamoivoizana na halatra dia ho entin'ny mpanjifa tanteraka.
Toeran'ireo orinasa manofa trano Bali:
Trac Astra: trac.astra.co.id
Echo Bali: echobalicarrental.com
Kuta Rent Rent: kutarentcars.com
Fangatahana amin'ny fanofaanana fiara miaraka amin'ireo orinasa eto an-toerana
Amin'ny ankapobeny - na tsy misy, na fametrahana fotsiny. Matetika tsy zahana ny zony. Bali dia nosy kely, ka mbola tsy misy toerana haleha amin'ny alàlan'ny fiara, ary tsy ho sarotra ny mahita anao.
Na izany aza, ny fitaterana fiara, ny zo, mazava ho azy, dia mbola ilaina, fa ny mpizahatany iraisam-pirenena na vahiny mpizahatany no manan-kery eto. Ny fisian'ny zon'ny firenena tokana (tsy indonezianina, tsy mpizahantany ary tsy iraisam-pirenena) dia mitovy amin'ny tsy fisian'ny zo amin'ny ankapobeny ary mitaky sazy. Nefa ofisialy izany, ary raha ny fanazaran-tena, mazàna ny kolikoly kely dia aloa amin'ny onitra, izay imbetsaka ambany noho ny fandoavana izany ary mitentina 4-5 dolara.
Inona ireo fiara manofa orinasa manolotra ny orinasa eto an-toerana?
Tsy malalaka izany. Ny malaza indrindra dia ny Toyota Avanza sy ny maodely Suzuki isan-karazany - APV, Katana, Karinum, Estilo, Splash. Ny ankamaroan'ny mpaninjara eo an-toerana dia anjakan'ny Toyota Avanza. Ny orinasa sasany dia tsy manana maodely hafa mihitsy. Ny vidin'ny fanofana an'ity fiara ity amin'ny alàlan'ny fampitana tanana dia $ 20 isan'andro eo ho eo, miaraka amin'ny fandefasana mandeha ho azy - $ 25. Manofa Toyota Avanza mandritra ny iray volana miaraka amin'ny fampitana tanana dia mitentina 350 $ eo ho eo.
Rehefa manofa fiara ao Bali ianao dia tokony hieritreritra:
Ny vidin'ny fanofana fiara amin'ny orinasa eto an-toerana matetika dia tsy misy fiantohana. Ny olana momba ny fiantohana dia tokony hazavaina mialoha amin'ny orinasa sy amin'ny antsipiriany, satria tsy misy ny CASCO any Bali. Raha misy fahavoazana ny fiara dia tokony hanonitra ny fahavoazana ny mpanjifa. Ary ny fiantohana, amin'ny maha-fitsipika azy, dia omena fanampiny fanampiny. Raha manana fiantohana ianao, dia toa toa izao ny tetika rehetra: mandoa fahavoazana hatramin'ny $ 200 ianao, ary raha mihoatra ny $ 200 ny vidin'ny fanamboarana ary tsy vita ny fahapotehana dia tsy maintsy mandoa $ 200 ianao, ary ny orinasa fiantohana no handoa ny ambiny. Araka izany, na dia amin'ny fiantohana aza dia mila mandoa zavatra ianao.
Ny ankamaroan'ny mpaninjara Bali dia tsy manome seza fiaran'ny ankizy.
Ny salan'isa vidin'ny lasantsy 1 litatra any Bali dia $ 0,7 (10 000 ropia eo an-toerana).
Ity nosy ity dia mihaona na marobe lalovan'ny lalana, indrindra fa amin'ny lafiny atsimo. Manodidina ny morontsirak'i Bali izy io dia voahodidin'ny lalana peratra. Lalana lehibe maro no mampifandray ny morontsiraka avaratra sy atsimo. Any amin'ny faritra avo dia misy bibilava.
Misy fambara vitsivitsy amin'ny làlana, ary tena ilaina ny manana mpiambina miaraka aminao.
Ny tobin-tsolika dia any amin'ny tanàn-dehibe ary koa amin'ny làlambe lehibe. Ny lasantsy ao amin'ny kilasy "Absolute" (mitovy amin'ny mahazatra A-95) dia mitentina 10 600 ropia isaky ny litatra.
Any amin'ny toerana maro, ao anatin'izany ny trano fisotroana amoron-dàlana, dia mivarotra solika ao anaty fitoeran-drano lehibe vita amin'ny plastika izy ireo. Na izany aza, eo ho eo ny vidiny eo ho eo amin'ny vidiny lanjan'ny lafo.
(Ny lohahevitra momba ny endri-dalàna momba ny fifamoivoizana dia aseho amin'ny antsipiriany eto)
Rehefa manofa fiara ao Bali ianao, dia mila tadidinao fa any Indonezia ny fifamoivoizana no sisa tavela. Manjaka ny korontana eny an-dàlana. Betsaka ny fiara mpitondra fiara. Ny voalohany dia manelingelina, fa ny ankamaroan'ny vahiny efa zatra tamin'ny 1-2 andro. Nahatsiravina be ny arabe. Ny mpamily Indoneziana dia manao tsinontsinona ny lalànan'ny fifamoivoizana. Ny tombony dia milina misy refy lehibe kokoa. Matetika izy ireo dia miakatra amin'ny tsipika marobe marika amin'ny làlana ary tsy tia mamadika signal.
Tena tsy azo atao ny manatanteraka (tsy mila fitsikerana) mahery setra loatra amin'ny jiro mena, raha tsy izany dia azo antoka ny fiantraikany aoriana. Raha ny marina, amin'ny tsy fahatongavan'ireo pôlisy any amin'ny sisintany, dia manohy mitondra fiara mandritra ny 10 segondra ny Indoneziana.
Ny karama malaza indrindra amin'ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana any Bali:
Fehikibo tsy nohamafisina - 250 rupe (000-17 $).
Tapakila mena - 500 rupees (000-35 dolara).
Ny fiampitana ny tsipika fijanonana dia 500 Rs ihany koa.
Miresaka amin'ny finday rehefa mitondra fiara - 750 000 ropia (53-55 dolara).
Ireo "polisin'ny fifamoivoizana" eo an-toerana indrindra dia ny manakana ny vahiny ary manara-maso tsara ny zon'izy ireo. Raha tsy misy fahazoan-dàlana (mpizahatany iraisam-pirenena na vonjimaika) dia handoa onitra amin'ny vola 1 ropia (000-000 dolara).
Na izany aza, amin'ny fampiharana, dia zara raha misy ny lamandy. Matetika, mifarana amin'ny fifampiraharahana kely izany rehetra izany, vokatr'izany dia mandoa kolikoly kely ilay mpanao ratsy - 50 000 ka hatramin'ny 100 ropia (000-3 dolara).